Ciidanka katirsan dowladda oo dad shacab ah ku dilay dagmada Balcad – Somali Top News
Ciidanka katirsan dowladda oo dad shacab ah ku dilay dagmada Balcad
July 17, 2019 Somali Top News	0 Comments
Ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen, kadib markii xalay koox hubeysan ay rasaas ku fureen Gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayey duleedka Degmada Balcad ee Gobalka Shabeellaha dhexe.
Falkan ayaa sida la sheegay ka dhacay Tuulada Xaanshooley oo u dhaxeysa Magaalada Muqdisho iyo degmada Balcad waxaana uu yimid ka dib markii darawalka Gaariga uu diiday inuu joojiyo Gaariga taasoo keentay rasaasta lagu furay.
Dhinaca kale, dagaal u dhexeeya labo Maleeshiyo beeleed ayaa ka socda nawaaxiga degmada Balcad, kuwaasoo isku heysta Milkiyada dhul halkaas ku yaalla. khasaaraha ka dhashay weli lama oga.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga ay la socdeen dadka shacabka ah ay rasaasta ku fureen Mid ka mid ah labada maleeshiyo beeleed oo ka shakiyey iney la socdeen maleeshiyada beesha kale ee colaadu kala dhexeysay.
Maamulka Sh/dhexe iyo kan degmada Balcad ayaan illaa hadda ka hadlin dhacdadan, iyadoo meydadka dadka dhintay la geeyey degmada Balcad halka dadka dhaawacmay loo soo qaaday Muqdisho.
← In response to Adna Adan’s diatribe against Somalia
Journalists hold memorial ceremony colleagues killed in Al-Shabab Attack in Kismayo →
Duulimaadyo caalami ah oo toos uga shaqo bilaabaya magaalada Muqdisho
July 7, 2019 Somali Top News 0
Golaha Iskaashiga maamul goboleedyada oo ku farxay Mooshinka laga Keenay M/Weyne Farmajo
Dowladda Federalka oo ku dhawaaqday in doorashada Galmudug ay ka dhaceyso Dh.Mareeb
June 24, 2019 Somali Top News 0